Wararka - Shisheeyaha sida wanaagsan ugu hadla Shiinaha ayaa tan sameeya!
Shisheeyaha si fiican ugu hadla Shiinaha ayaa tan sameeya!
Shisheeyaha sida wanaagsan ugu hadla Shiinaha ayaa tan sameeya!
Dhawaan, arday leh aasaas eber dhammaystiran, markay baratay saddex fasal, waxay ii sheegtay inay u beddelayso macallin ku takhasusay afka Ingiriiska maxaa yeelay ma doonayso inay barato naxwaha Shiinaha ama waxyaabaha la xiriira HSK, laakiin waxay doonaysaa oo keliya inay wax barto qaar ka mid ah luuqada nolol maalmeedka, sida sida Iibsashada tigidhada hawada, sida wax looga iibsado Taobao, iwm… si fiican… Waxaan u arkay heerka Shiinaha ee mustaqbalka.
Si kasta oo luqad aad ubarato, aad ayey muhiim u tahay inaad aasaaska dhigto. Naxwaha iyo ereybixintu waa aasaasi. Waxaan rabaa inaan ordo kahor intaanan istaagin, mana u adkaysan karo xoogaa ku celcelin ah caajis. Hal dhamaad ayaa jira oo macquul maahan in luqaddan lagu wada xiriiro. Sida lafilayo, inbadan oo kamid ah bartayaasha luuqada labaad waxay kudhaceen talaabada ugu horeysa, waxa kaliya ee ay baran karaan hadii ay aad ugu hammuun qabaan guusha degdega ah iyo macaashka dhaqsaha badan ayaa kaliya la baran karaa.
Shisheeyeyaal badan oo sifiican ugu hadla Shiinaha oo adeegsada ereyo sax ah oo aan ka helno nolosha, sidee ayey u sameeyaan?
Waa inuu goobjoog ahaadaa:
Iyadoo aan loo eegin inaad Shiinaha ku baranayso Shiinaha iyo in kale, waa inay jiraan dad Shiineys ah oo hareerahaaga ah oo kula soo xiriiraya. Marka la soo koobo, luqaddu way mirxanaysaa. Wixii aad ku barato fasalka waa la ilaawi doonaa haddii aadan inta badan nolosha u isticmaalin. Walaalka yar ee iibiya waxyaabaha xusuusta leh ee Marooko wuxuu Shiinaha ka bartay tuubada wuxuuna u adeegsaday dalxiisayaasha maalinta xigta. Afka ayuu kala qaaday markii uu afka kala qaaday kaftanka Shiinaha ee khadka tooska ah ee caanka ka ah Shiinaha.
Nasiib wanaagse, waxaan ku noolnahay xilli qarxintii internetka, ilaha wax-barashada waa kuwo adduunka laga wadaago, waxaanna u adeegsan karnaa waqtiga kala-go'ay si aan u baranno Shiineys lagu hadlo oo fiidiyoowyo Shiineys ah; haddii aan rabno inaan xusuusano jilayaasha Shiinaha, kaararka flash flash. Ilaahyadan waaweyn ee ku fiican barashada luuqada, ee aan kumanaan saacadood ah ururin oo maalmo yar ku fahansan luqadaha ajnabiga ah, waxay khiyaameeyaan Yindi.
Kaqeybgal waxqabadyada luuqadda cusub:
Ku dadaal inaad ka qaybgasho khudbadaha, riwaayadaha, martigelinta, heesaha, iwm, waxkastoo aad jeceshahay. Markaad u diyaar garowdo waxqabadyadan, xaqiiqdii ma doonaysid inaad wejigaaga ku lumiso masraxa. Waqtigaan, waxaad si fiican u xafidi doontaa agabyada luqadaha qalaad, waxaadna si taxaddar leh uga fikiri doontaa xulashada erayada iyo sameynta jumladaha, iyo xawaaraha ku dhawaaqiddaada. Sidan ayaad ku baran doontaa Shiinaha dhowr sano kadib. Way adagtahay in la ilaawo.
Adeegso taleefankaaga gacanta si aad u duubto oo u dhageysato codka asalka ah ee Shiinahaaga:
Duub gabal shiineys ah oo aad kuhadasho maalin kasta, doorbid ahaan muujintaas gaarka ah. Waxaan aaminsanahay in ka dib markaad dhageysato dhawaaq ku dhawaaqaya naftaada wanaag, inaadan mar dambe yeelan doonin geesinimo aad kaga qosliso dadka kale. Inta hawshani socoto, waxaad ogaan doontaa inaadan aqoon sidaad u sheegto waxyaabaha aad inta badan u isticmaasho noloshaada, sida saxanka lagu dhaqo khudradda, qasabadaha, iwm. Qaar ka mid ah ku dhawaaqida oo aad ku kalsoonaan jirtay ayaa laga yaabaa inay dibada ka baxaan laxanka, iyo naxwaha aadan fiirin inay khalad noqon karto. Raadi dhibaatadaada oo dagaalka badhbaad tahay.
Is-hoosayso, wax walba ma xamili kartid:
Xishoodku ma aha dabeecad waddan kasta aqoonsan yahay, laakiin waad isku kalsoonaan kartaa, ha isla weyneyn, waxaa jira kuwo kale oo bannaanka jooga, weligoodna baran kartid luqad kasta.
Ruux "xishood la'aan"
Ilaa iyo intaadan aheyn afhayeenka wasaarada arimaha dibada, waad khaldami doontaa hadii aad qalad sameyso, mana lagu ganaaxi doono. Ilaa iyo intaad dhahdo, dadka Shiinaha badankood runtii way fahmi karaan, waxayna had iyo jeer u dulqaataan inay Shiinaha kula hadlaan shisheeyaha. Mar alla markay xishoodo ama wejiga lumiso, marwalba way xusuusan doonaan qodobkan. Adigoon isticmaalin jumlada, dhibaatada weligeed lama ogaan doono.
Raadi astaan ​​luuqadeed si aad ugu dayato:
Raadi dabeecad la mid ah codkaaga oo aad jeceshahay inaad ku dayato sida uu u hadlayo. Tani waxay waxtar badan u leedahay hagaajinta dhawaaqaaga, laxankaaga, xawaaraha hadalka, iwm!